Ireo fitaovana 18 an-dakozia tsara indrindra hovidiana amin'ny andro an-dàlana - An-Trano
Beauty Bridal Fitness Iraisam-Pirenena Gynaec Mpahay Nahatratra Fahasalamana Indian Celeb Style Drafitra Sy Torohevitra Lakozia Maharitra
Fifanarahana ara-tsakafo 18 ho an'ny lakozia tsara indrindra hiadiana amin'ny andro an-dàlana, manomboka amin'ny Juicer mora madio ka hatramin'ny fanasana vilia
Mandany fotoana bebe kokoa ao an-dakozia ianao noho ny teo aloha, noho izany voajanahary, te-hanavao fanavaozana vitsivitsy ianao-saingy tsy te hamaky ny banky ianao. Vintana ianao: omena fihenam-bidy toy ny orinasa tsy misy olona ny fitaovana kely sy lehibe Andro Way , Fivarotana super roa andro nataon'i Wayfair androany hatramin'ny 29 aprily amin'ny 3 ora maraina ET. Ireto misy 18 mendrika ny mipoitra haingana — anio sy rahampitso alohan'ny hivarotany - mandritra ny varotra lehibe.
Mifandraika: Ny fanomezana ho an'ny Fetin'ny Reny rehetra tadiaviny, raha ny Zodiakiny famantarana
1. Faritry ny gazy Luxe
Samsung Range 30-Inch Smart Slide-In Range miaraka amin'ny Griddle
Manoro hevitra anao ve izahay mba hividy fatana vaovao? Eny, izahay, ary misy antony marim-pototra: Ity hatsarana ity dia mampifandray amin'ny Wi-Fi, azo fehezina ary miaraka amina mpandoro dimy. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fisian'ny endri-panafody izay afaka manampy anao amin'ny fanomanana ny sakafo endasina tianao rehetra dia ny sans-oil.
Vidio io ($ 2.299; $ 2,069)
2. Vata fampangatsiahana varavarana frantsay
Samsung 36 'Door French 28 cu. ft. Smart Energy Star Refrigerator
Aorian'ny taona 2020, tsy manome tsiny * olona * izahay noho ny fanirianay ny taloha sy ny vaovao. Mitsitsia ao amin'ity vata fampangatsiahana telo-varavarana ity, vita amin'ny vy tsy mahazaka dian-tànana (vakio: mahatohitra zaza) vy vy tsy misy fangarony.
Vidio io (2,799 $; $ 2,519)
3. Ny fryer Air
Azonao atao ny manangana tsikelikely ny fanangonanao fitaovana ... na, raha mandeha miaraka amin'ity lafaoro Cuisinart ity ianao dia afaka multitask miaraka amina fitambarana convection, hery mahazatra sy fanala amin'ny rivotra izay mahasolo ny toaster anao, lafaoro ary maro hafa. Miaraka amin'ny herinaratra 1 800 watt, ity fitaovana mahavariana ity dia manana enina enina, ao anatin'izany ny fanendasana amin'ny rivotra, fanaovan-tsakafo, kobam-bary, fanaova, mafana ary toast.
Vidio io ($ 270; $ 150)
4. Vata fampangatsiahana divay
NewAir Dual Zone 24 in. Fametahana divay divay 46-tavoahangy
Tongava ririnina, ny hany tadiavintsika dia ny miondrika eo ambony sezalà miaraka amina vera vera. Ary ity sombin-javatra ity dia afaka mitazona tavoahangy 750 milimetatra manara-penitra 46, ka tena mety amin'ny fametahana azy. Ny fiasa mahavariana indrindra dia ny faritry ny mari-pana roa, izay manova ny hafanan'ny vata fampangatsiahana ho tonga lafatra ho an'ny divay mena, fotsy na mamiratra voatahiry ao anatiny.
Vidio io (970 $; $ 854)
Caso Design 20 Qt. Sous Vide Stick Cooker
Andrahoy ny zava-drehetra manomboka amin'ny akoho ka hatramin'ny legioma ka hatramin'ny atody amin'ny alàlan'ny fametahana ny vilany fandrahoana ao anaty vilany feno, ampio ireo sakafo atondraka ary avelao ny fanaraha-maso efa niasa hanao majika. Mora miraikitra amin'ny vilany misy habeny ny tahony azo ampiharina, ary ny tontonana fanaraha-maso mikasika ny elektronika (izay misy bokotra rotary) dia mora ampiasaina.
Vidio io ($ 130, $ 99)
6. Mpikirakira sakafo matanjaka be
Cuisinart Processeur Sakafo 14-Cup
Raha mieritreritra ianao fa tsy hampiasa mpanodin-tsakafo mihitsy dia mieritrereta indray. Ity motera miasa ity dia afaka mitetika legioma, manosotra fromazy, lasopy puré ary mety mipoitra mihitsy aza. Ny koveta fiasana dia misy fantsom-pisakafoanana roa ho an'ny fanamorana, ary koa ny lelany vy tsy metaly marobe (ao anatin'izany ny kapila mangalatra, ny kapila fanapahana antonony ary ny fanapahana / ny fangaro / ny fametahana. Fanampin'izany, ny faritra azo esorina rehetra dia azo antoka amin'ny fanasana vilia ho fanadiovana mora foana. (Nefa aza esorina aminay izany- Ina Garten dia mpankafy marika marika Cuisinart ihany koa.)
Vidio io ($ 365; $ 230)
7. Mpanamboatra mofo
Mpanao masinina Convection mofo
Tsy misy zavatra hafa mitovy amin'ny fofon'ny mofo vaovao rehefa miditra ao amin'ny mpivaro-mofo ianao. Noho izany, maninona raha entinao ao an-dakoziananao ilay mpivaro-mofo? Miaraka amin'ny sehatry ny gluten tsy misy gluten sy ambany eo amin'ireo safidy 16 voatendry, dia ho pro ianao amin'ny fotoana fohy. Tsy lazaina intsony, ny mpanamboatra koa dia ahitana loko crust telo, safidy telo habe amin'ny mofo ary mofo sy koba ary mofo 100 mahery.
Vidio io (299 $; $ 180)
8. Mpifangaro miorina amin'ny ambaratonga avo lenta
Azo antoka, mitsangatsangana dia splurge, fa izy ireo tompony amin'ny multitasking sy toy izany mendrika ny fampiasam-bola. Hahita fomba mitovy amin'izany ianao amin'ny lakozia mofomamy marobe, noho ny lovia 5-quart sy maotera 500-watt marobe. Feno tanteraka izy io, miaraka amina lohany mitongilana, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha 12 sy fararano, koba fisaka ary fametahana karavasy vy tsy misy vy.
Vidio io ($ 365; 200 $)
9. Seza famonoana raclette
The Rock avy amin'i Starfrit Raclette 17 Piece Grill Set
Vilia raclette kely valo (miaraka amina scrapers mifanentana mba hahazoana an'io fromazy natsonika matsiro io avy eo ambonin'ny makarakara) dia mahatonga ny fandrosoana an'io fromazy soisa matsiro io ho tampoka. Ary ny bonus, manana faritra tsy miraikitra izy ary azo antoka amin'ny fanasana vilia.
Vidio io (110 $; $ 86)
Buy tsara indrindra
10. Ny lafaoro mpanao mofo mangatsiaka
Ity lafaoro toaster ity dia malama ary — sahy hoy ve isika? —Chic. Fanampin'izay, izy io dia miasa amin'ny lafaoro feno habe nefa tsy manao ny lakozianareo manontolo ho matsiro toy izany koa, lafaoro. Miaraka amin'ny fiasa 6 (manendasa, mitono hena, broil, convection, roast, defrost, bagel, cookies, proof, frozen ary hena probe) dia azonao atao tsara ny mamita ny asan'ny lakozia amin'ny fikitihana bokotra tsotra fotsiny.
Vidio io ($ 510; $ 280)
11. Cooker miadana ambony kalitao
Herinaratra miakanjo rehetra 6.5 Qt. Cooker miadana
Faly amin'ny vanim-potoana sakay ianao, saingy tsy dia mandany fotoana be loatra amin'ny famaohana sakafo hariva amin'ny fatana mafana. Jereo, ity mahandro mangina manjelanjelatra mamirapiratra ity, izay ahafahanao manomana sakafo hariva mafana sy milamina izay tsy misy ezaka velively. Ny sarom-vera mitafo dia mamela anao hijery amin'ny sakafonao nefa tsy mamoaka ny setroka rehetra, ary ny sisin-doko tsy misy atiny dia miantoka ny fanadiovana mora (izy io koa dia milina fanasana vilia).
Vidio io (400 $; $ 250)
12. Blender adidy mavesatra
Cuisinart Hurricane ™ 2.25 tampon'ny HP Blender
Raha te-hahatsapa ho toy ny mpahandro mahafinaritra ianao dia apetraho fotsiny ity blender ity. Izy io dia mahatonga ny asa mora amin'ny zava-drehetra manomboka amin'ny fampifangaroana ny malama maraina ka hatramin'ny fikikisana ireo sakamandia fromazy Parmesan (tena amporisihinay ianao ho fikafika fety). Azonao atao koa ny manorotoro ranomandry (satria, tsy mitovy ny margaritao raha tsy misy azy).
Vidio io ($ 267;$ 200)
13. Keurig mahafinaritra
Keurig K-Duo Coffee Maker, miaraka amin'ny Single-Serve K-Cup Pod, ary 12 Cup Carafe Brewer
Na tianao ny anao kafe tsy misy frills na PSL-ed, ity dia labiera tokana kaopy izay hanamboatra vilany 6 ka hatramin'ny 12 kaopy hanomezana fahafaham-po ny fanamboarana kafeinanao. Misy bokotra mahery koa, raha tianao ny kafe akaiky ny lasantsy jet.
Vidio io (170 $;$ 141)
14. Juice mahomby be
Juiciet Press Cold vert vert mamiratra
Tsy maninona izay karazana ranom-boankazo tadiavinao; ity masinina ity dia afaka miatrika an'io veggie faka na ravina maintso mafy atosinao. Ary raha dinihina ny vidin'ny ranom-boankazo novidin'ny magazay dia mandoa vola izy io aorian'ny fampiasana vitsivitsy fotsiny. Raha ny filazan'ny mpandinika kintana dimy iray dia mahomby sy mora diovina izy io - ny zavatra rehetra tadiavintsika anaty juiciet.
Vidio (200 $; 120 $)
15. Fanasana vilia azo atao Portable
Fanasan-damba azo entina GE Portable amin'ny Stainless Steel
Angamba tsy mandalo lovia iray taonina ianao. Angamba kely loatra ny habakanao ka tsy afaka manasa lovia fanasana mahazatra. Na inona na inona antony mety hanananao, GE dia nofonosinao tamin'ity mpanasa vilia ity. Manasongadina ny tsingerin'ny fahatsapana ho azy, ny fanasana ambaratonga telo, ny mpamatsy sakafo sarotra ary ny safidy fanadiovana, ity fitaovana mandeha amin'ny finday ity dia afaka manao izay rehetra vitan'ny fanasana vilia mahazatra.
Vidio io ($ 759; $ 599)
16. mpankafy valindrihana marani-tsaina
54-Inch Smart Home mifanentana 3 Blade Smart Ceiling Fan miaraka amin'ny lavitra
Ny endrika manjelanjelatra an'ity mpankafy ity dia hifanaraka tsara amin'ny haingo nentin-drazana hatramin'ny maoderina, ary azonao atao ny mampiasa ny fampiharana WAC Lighting hanova ny hafainganan'ny mpankafy avy amin'ny telefaoninao.
kiraro mahazatra an'ny vehivavy hitafy jeans
Vidio io ($ 418; $ 250)
17. A Aircon Portable
Frigidaire 13000 BTU Portable Air Conditioner miaraka amin'ny lavitra
Aza mipetrapetraka amin'io efitrano mafana be iray io intsony, raha vantany vao ampidirinao ao anaty efitrano tianao io hery matanjaka io. Ny famantaranandro sy ny fanaraha-maso lavitra azo ovaina dia manamora ny fifehezana ny halavany ary iza amin'ireo hafainganam-pandeha telo hamoaka ny cool.
Vidio io (520 $; $ 440)
18. Vacuum Robot
iRobot Roomba 694 Vacuum Robot mifandray Wi-Fi
Diovina bebe kokoa, tsara kokoa ary mora kokoa miaraka amin'ity banga robot ity fa tsy ny fianaranao ny fandaharam-potoanao fanadiovana ihany, fa misy ny Google Assistant sy ny mifanentana amin'ny Alexa mba hahafahanao manomboka session amin'ny fanadiovana amin'ny feonao fotsiny. Ary tandremo, vanim-potoana fandotoana vovobony sy biby avo lenta - ity fantsom-pahavaratra robot ity dia hanoro fanadiovana fanampiny hitazomana ny fahadiovanao hatrany.
Vidio io (540 $; $ 275)
Mifandraika: Entana ankafizin'ny mpanjifa 15 avy amin'ny Wayfair miaraka amin'ny hevitra mihoatra ny 1 000 5-Star
Sokajy Hoditra Products Vaovao Momba Ny Lamaody
fitsaboana volo very ao an-trano
boriky lehibe manao pataloha jeans
volo fanasitranana fanafody fitsaboana ao an-trano
lisitr'ireo sarimihetsika hollywood romantika